အစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများကြမ်းသီးနှံအစေ့များပါဝင်သည်, ပါဝင်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်စေသည့်အမှုန်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးလိုအပ်သည့်ပြောင်းဖူး. ဒီအမှုန်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, တိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်ခွဲခြင်း၏မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်, သင့်မွေးမြူရေးအတွက်အစာကြေလွယ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုများစွာရှိသည်. လိုအပ်သောအစာကျွေးသည့်ကြိတ်စက်ကိုအစာအရွယ်အစားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်, အစာကျွေးမှုနှုန်း, operating အခြေအနေများနှင့်အစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လိုချင်သောထုတ်ကုန် output ကို.
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ hammer-mills ကိုအသုံးပြုနေသည် ။Victor သည်အမှုန်များကိုအပြီးသတ်ထုတ်လုပ်ရန်တူစက်ကြိတ်ခွဲစက်၏ pulverizing နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပျော့ပျောင်း။ ကြမ်းတမ်းသောတိရိစ္ဆာန်အစာများကိုက်ညီမှုကိုအသွင်ပြောင်းသောအမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်တူသောကြိတ်ခွဲစက်များကိုပေးသည်။.
ဤသံတူစက်သည်ကောက်ရိုးကဲ့သို့ဇီဝထုကြိတ်ခြင်းကိုကြိတ်ရန်အသုံးပြုသည်, အညှာ, နှင့်သစ်သားချစ်ပ်, သစ်ပင်အခက်နှင့်သစ်တောမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် ၃.၅ မီလီမီတာအောက်လျော့နည်းနိုင်သည်, pelletzing နှင့် briquette မတိုင်မီအရွယ်အစားသည်မှန်ကန်သည်။ ၎င်းသည် yam ခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောမျိုးစေ့များစိုက်ပျိုးသည့်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်သည်။, မြေပဲ,ဆန်နှင့်အခြားအပင်များ, ပြောင်း, ဂျုံ, အားလုံးဂျုံပဲ.
– မည်သည့် friable ပစ္စည်းများနှင့်ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်
– roller စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိမ့်
– တူစက်ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထားသောအမှုန့်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လုံး ၀ ဖြစ်လိမ့်မည်. အမှုန်များ၏မျက်နှာပြင်ပွတ်ပုံပေါ်ပါတယ်